Netro Whisperer, waa shidma ku habboon in la daryeelo beertaada | Wararka IPhone
Mid ka mid ah aagagga qalabka aaladda otomaatiga ah ay macno ugu sameeyaan waa daryeelka beerta. Guriga intiisa kale waxay ku bixiyaan raaxo, xoogaa keyd tamar ah, ama nabadgelyo ah kaamirooyinka. Laakiin kuwa inta badan i caawiyey aniga oo aan shaki ku jirin waxay ahaayeen kuwa ku jihaysan daryeelka beerta. Wixii hore ahaan jiray hawl aad u jahwareersan maxaa yeelay waligeed ma aysan gaarin natiijo wanaagsan, hadda way fududahay oo dadaal badan ayaa ka yar.
Qalabka sida Netro Sprite ayaa mas'uul ka ah xakamaynta waraabka beertaada iyo la qabsiga xaaladaha cimilada, iyadoo lagu gaarayo waxtarka ugu badan ee waraabinta. Maanta waxaan tijaabinay qalab loogu talagalay xakamaynta waraabka caqliga leh: Netro Whisperer, oo cabiraya xaaladaha qoyaanka ciidda, qorraxda soo-gaadhista iyo heerkulka waqtiga dhabta ah, xog sii wanaajin doonta waxtarka waraabka.
Waa aalad yar oo gebi ahaanba bilaa wireless ah oo si toos ah dhulka loogu qodbay, halkaasoo ay xogta ka soo ururiso. Waxay ku shaqeysaa isku xirnaanta WiFi ee 2,4GHz, oo ku xirmeysa isla shabakadda Netro Sprite-kaaga, kantaroolaha ugu weyn, ee ay u dirto dhammaan xogta la soo ururiyay. Waxay ku shaqeysaa batari buuxa oo siinaya ismaamul ah 2 illaa 4 toddobaad, iyadoo kuxiran qaabeynta aad hagaajisay, Laakiin uma baahnid inaad ka walwasho dib-u-soo-buuxinta iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in ay ku dartay guddi qorraxda oo dib u soo celiya. Maalin buuxda oo qorraxdu ufiicantahay 2-4 usbuuc ee ismaamulka, kaliya waa inaad ka walwashaa inaad dhigatid meel qorraxdu si fiican ugu muuqata.
Waxay leedahay dareeraha huurka, oo lagu dhejiyay qaybta birta ah ee dhulka la galiyay, dareemayaal iftiin leh oo muujinaya qorraxda iyo dareeraha heerkulka jirka. Saddexdaan dareemayaal waxay ku uruurisaa macluumaad aasaasi ah si loo ogaado xaaladda dhulka iyo in la ogaado inta ay le'eg tahay biyaha dhulkaagu u baahan yahay ee waraabka ugu habboon. La'aan dareerahaan, Netro Sprite waa inuu qiimeeyaa xogtaan, runtuna waxay tahay ilaa iyo hada inay sifiican uqabatay, laakiin had iyo jeer way fiicnaan doontaa in la helo xog dhab ah iyo waqtiga dhabta ah. Ka sokow dareemayaashaas, waxay leedahay aaladda hore ee tilmaanta xaaladda aaladda waxayna leedahay nal qurxin leh.
Nidaamka qaabeynta waa mid aad u fudud, waxaadna ku arki kartaa si faahfaahsan fiidiyaha la socda maqaalka. Markaad ku xidho Netro Sprite dhowr jeer oo ka mid ah xuduudaha Netro Whisperer ayaa u baahan in la qaabeeyo oo saameeya nolosha batteriga: firfircoonida hore ee LED iyo cusbooneysiinta soo noqnoqoshada. Marka tan la dhammeeyo, waad iloobi kartaa inaad leedahay dareemayaal, maxaa yeelay dhammaantood waa wada otomatik ah, iyada oo aan isticmaalehu u baahnayn inuu farageliyo marka laga reebo inuu dib u eego xogta ay ururinayso xiisaha kaliya.
Dareemuhu wuxuu ku shaqeyn doonaa aagga waraabka ee aad la xiriirtay, sidaas darteed waxaa ugu wanaagsan in la dhigo dareemayaal badan sida aad leedahay aagagga waraabka, dabcanna ku rid aagga waraabka ee u dhigma. Haddii dareemahu arko in qoyaanka dhulku u oggol yahay ka fogaanshaha waraabinta, way sameyn doontaa, ama waxay hagaajin doontaa waqtiyada waraabka. Haysashada xogta dhabta ahi waa faa iido weyn, maxaa yeelay dhammaan madaxyada waraabku isku mid ma aha ama dhammaan aagagga beertaadu kuma wada jiraan qorraxda.
Daryeelka beerta wuxuu noqon karaa hawl aan aad loogu mahadcelin oo aad u jilicsan, taas oo 15-ka maalmood ee aad fasaxa ku maqantahay aad ka tuuri karto dadaal kasta oo sanad ah. Netro Whisperer waa dareemayaal wireless ah oo cabiraya xaaladaha dhabta ah ee dhulkaaga una dira macluumaadkaas Netro Sprite, oo ah kantaroolaha waraabka dhexe, si loo hubiyo in waraabka beertaadu yahay mid kufiican markasta iyo aag kasta. Iyada oo qaabeyn aad u fudud iyo hawlgal hufan oo hufan loogu talagalay isticmaalaha, waa qalab aad loogu talinayo in lagu dhammaystiro nidaamka waraabka. Qiimaheeda waa $ 49,99 dukaanka rasmiga ah ee Netro (isku xirka), waqtigan xaadirka ah meesha kaliya ee aad ka heli karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Netro Whisperer, waa shidma ku habboon daryeelka beertaada
Alphabet hadda waa shirkadda leh lacagta ugu badan adduunka, kana horreeyaan Apple